भागीरथी भट्टलाई यसरि गरेका रहेछन दिनेश भट्टले बल!त्कार पछी ह,त्या,डरलाग्दो रहस्याको पर्दाफास -
भागीरथी भट्टलाई यसरि गरेका रहेछन दिनेश भट्टले बल!त्कार पछी ह,त्या,डरलाग्दो रहस्याको पर्दाफास
काठमाडौं -बैतडी दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ चडेपानी की १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टको बला,त्कारपछि ह,त्या गरेको आरो,पमा प्रहरीले दिनेश भट्टलाई पक्रा,उ गरेको छ। भागरथी पढ्ने सनातन धर्म माविमाकै कक्षा ११ मा पढ्ने दिनेशलाई प्रहरीले बुधबार ९आज० नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। १३ दिनअघि विद्यालयबाट नफर्किएपछि खोजी गर्दा भागरथीको श,व घरभन्दा तीन किलोमिटर टाढा रहेको लबलेक सामुदायिक वनमा बीभत्स अव,स्थामा भेटिएको थियो।
एक सातालामो प्रहरी अनुस,न्धानपछि प्रहरीले भट्टको हत्या आरोपमा दिनेशलाई सार्वजनिक गर्न लागेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए। ‘आरोपितले अप,राध स्वी,कार गरिसकेका छन्’, डीआईजी सुवेदीले भने, ‘आरोपितलाई दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गछौँ।’ प्रहरीले उनीमाथि शं,का गरेर प,क्राउ नगरी केहि दिनदेखि निगरानीमा गरिरहेको थियो।सनातन धर्म माविमाको कक्षा १२ मा पढ्ने भागरथीलाई दिनेशले लामो समयदेखि एकतर्फी रुपमा मन पराएको र १३ दिनअघि स्कुलबाट एक्लै फर्किएको मौका छोपेर बलात्कारपछि ह,त्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टले उनको बला,त्कारपछि घाँटी निमोठेर ह,त्या भएको देखाएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले सुरुमा भागरथीलाई भीरबाट ल,डाएको र घाइ,ते अवस्थामा बला,त्कार गरेको बयान दिएका छन्। दो,षीलाई कार,वाहीको माग गर्दै पीडित पक्षले अस्पतालमै श,व छाडेर आन्दोलन गर्दै आएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मंगलबार बैतडीकी १७ वर्षीया किशोरी भागरथी भट्टलाई बला,त्कारपछि ह,त्या गर्ने दो,षी नजीक प्रहरी पुगेको बताएका थिए। भट्टसम्बन्धी घ,टना कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको जस्तो जटिल नरहेको जनाउँदै उनले विगतबाट पाठ सिकेर टु,ङ्गोमा पुर्‍याउने गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको बताएका थिए।निर्मला पन्त प्रक,रणमा असफल देखिएको प्रहरी भागरथी घटनाका दोषी जसरी पनि पत्ता लगाएर गुमेको विश्वास फर्काउने जोसमा थियो। ‘निर्मला घटनामा धेरै त्रुटि थिए, त्यो हाम्रा लागि सिकाइ पनि रह्यो, त्यही सिकाइबाट हामीले भागरथीको घट,नामा अब्बल अनु,सन्धान गरेका छौं। प्रदेशभरिका अनुसन्धानविज्ञ यस घट,नामा खटिएका छन्, सीआईबीको प्राविधिक टोली पनि यतै छ। त्यसैले दोषी उम्किदैनौं’, डीआईजी सुवेदीले भने।
भागरथीका दुई दिदी र एक जना दाइ छन्। दिदीहरू तुलसी र पार्वतीको बिहे भइसकेको छ। स्थानीय भूमिराज माविमा १० कक्षासम्म पढेका केशव घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले बहिनीलाई पढाउनका लागि मजदुरी गर्न भारतको राजधानी दिल्लीमा थिए। लकडाउनका बेला घर फर्किएका केशव बुवाकोे किरिया गरेर माघ ३ गते दिल्ली गएका थिए। सनातन धर्म माविबाट पाँच मिनेट हिँडेपछि, खोचलेक बजार आउँछ। खोचलेक बजारको केही तल दोगडाकेदार गाउँपालिकाको केन्द्र पनि छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था भएकाले बजारमा चहलपहल हुने गर्छ। त्यसपछि भीरकट्या भन्ने डाँडो भएर सिल्ल गाउँ हुँदै लवलेक वनमा पुगिन्छ। खोचलेक बजारबाट लवलेक वनको दूरी झन्डै एक किलोमिटर छ। करिब दुई किलोमिटरको वन क्षेत्र सकिनेबित्तिकै पासिमबाटा भन्ने गाउँ सुरु हुन्छ। पासिमबाटा भन्ने स्थानबाट चार सय मिटरको दूरीमा भागरथीको ह,त्या भएको हो।
Previous सपना रोका र बिनयजंग का*ण्डले लियो अर्को रुप ! विनयजंग बस्नेत माथि चलाईयो यस्तो मुद्दा,हुने भयो यस्तो स,जाय
Next बल,त्कार पछी ह,त्या गरिएकी भागरथी भट्टको यस स्वार्थमा बुझ्यो परिवारले शब ! ह,त्याको खुल्यो यस्तो रहस्या